SS Mod Menu Apk Download ho an'ny Android [PUBG 2022 Hacks]
SS Mod Menu dia fampiharana manohana ho an'ireo izay tia milalao PUBG Mobile amin'ny finday avo lenta sy ny takelaka. Izy io dia ampiasaina amin'ny tanjona fitaka ary misy karazana cheat na hacks isan-karazany azonao ampiasaina amin'ny lalao raha toa ianao ka noob.
Na izany aza dia nomenay eto amin'ity pejy ity ity fampiharana ity. Raha te hampidina azy ianao dia afaka manao izany maimaim-poana. Ankoatr'izay, tsy misy fiampangana amin'ny fampiasana ny endriny. Ankoatr'izay, tsy misy endrika miafina mihitsy.
Ity fampiharana ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny sehatra filokana iray izay nolazaiko tao amin'ny fehintsoratra etsy ambony. Na dia tsy mamporisika anao hampiasa fitaovana toy izany ho anao aza izahay raha mbola liana ianao dia mandehana maka ny Apk.
Inona no Menu SS Mod?
SS Mod Menu dia fitaovana hacking mpanohana ho an'ny telefaona finday Android hampiasa karazana hosoka maro ao amin'ny PUBG Mobile. PUBGM dia iray amin'ireo sehatra filalaovana an-tserasera tsara indrindra izay manana endri-javatra mahatalanjona maro saingy sarotra ny filalaovana azy.
Noho izany, maro ny olona mampiasa mampihatra hacks isan-karazany ary ity fampiharana ity dia iray amin'ireo fampiharana ireo. Na izany aza, ity rindrambaiko ity dia tena vaovao ary manana fahaizana miasa nefa tsy avela hahita ny hack ny bot.
Raha ny marina, ao amin'ny fampiharana lalao ofisialy dia misy bots, izay mahita hetsika mampiahiahy. Amin'ny voalohany, tsy manana fitaovana toy izany ny mpijirika mba hialana amin'izany karazana fiarovana izany. Saingy amin'izao fotoana izao dia manana fahafahana manome endri-javatra Anti-Ban ho an'ireo mpankafy azy ireo hacks vaovao ireo.
Ity dia fampiharana an'ny antoko fahatelo izay novolavolain'ny mpankafy PUBGM. Tena fitahiana ho an'ireo izay te hilalao ilay lalao nefa tsy manao ezaka be.
Araka ny fantatrao fa misy kilalao an-tapitrisany maro manerantany. Ambonin'izany, ny ankamaroan'izy ireo dia mampiasa fitaovana avo lenta mba hilalao. Izany no antony tsy ahafahan'ny mpilalao sendra mifaninana amin'ireo mpilalao toa izany.
Noho izany, amin'io tranga io, azonao atao ny mampiasa karazana hacks mahery vaika toy ny wallhack, Anti Shake, Aim lock, Aimbot, sy ny maro hafa. Betsaka kokoa ny fitaka azonao ampiharina amin'ny fampiharana izay hozaraiko aminao amin'ity lahatsoratra ity.
Noho izany, mijanòna aminay hatramin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Ankoatra izany, ho fantatrao ny fomba fampiasana ny Injector. Saingy alohan'izany dia tsy maintsy misintona ny Apk amin'ity pejy ity ianao.
Antsipirian'ny SS Mod Menu
anarana SS Mod Menu
Android takiana 4.1 ary Up
Hacks ho an'ny PUBG Mobile
Ny tanjonay dia tsy ny hampirisika ny olona hampiasa loharano toy izany mba hahazoany toerana ambony amin'ny lalao. Saingy azo ampahibemaso io ary zarainay ho an'ny tanjona fanabeazana sy fialamboly.
Noho izany, eto ambany izahay dia nizara ny lisitry ny hacks azonao ampiasaina amin'ny kaontinao gaming.
Kely ny Recoil
Auto Headshot manomboka amin'ny 50M ka hatramin'ny 75M
Bala Magic 50M
M24 Tsy misy bala mitete
Kar-98 Tsy misy bala
VSS Tsy misy bala
Long tanana mandroso
Ny hafainganam-pandeha Jeep
Ahoana ny fampiasana SS Mod Menu?
Ambonin'izany rehetra izany dia ny cheat izay azonao ampiharina amin'ny telefaona Android anao fotsiny. Ka tsy mifanaraka amin'ny fitaovana Desktop na emulator izy ireo. Antena Head no hack farany an'ny PUBG Mobile. Tena malaza amin'ny Garena Free Fire io. Soa ihany fa efa azo alefa amin'ny PUBG Mobile koa izy izao.
Noho izany, raha te hampiasa ny SS Mod Menu amin'ny telefaona findainao dia tsy maintsy ampidininao ny Apk-ny ary apetraho amin'ny telefaona finday na takelakao. Avy eo dia mila mandefa an'io fampiharana io amin'ny fitaovanao ianao ary hahazo menio kely. Tsy mila fidirana faka io satria miasa amin'ny telefaona miorim-paka sy tsy miorim-paka.
Azonao atao ny misafidy ny safidy na No Root na Root Menu. Mahazo hacks saika mitovy amin'ny menus roa ianao. Noho izany, hahazo lisitra ianao aorian'ny famafana ny safidy. Any no ahafahanao mamela ny cheat mba hampihatra amin'ny lalao.
Ahoana ny fampidinana ny SS Mod Menu Apk?
Raha mitady ny rakitra Apk farany momba an'ity rindranasa mahavariana ity ianao, dia azonao atao ity pejy ity. Aza mandeha amin'ny toerana hafa. Mandehana fotsiny mankany amin'ny faran'ity lahatsoratra ity izay hahazoanao rohy fampidinana mivantana.
Tsindrio io rohy na bokotra io ary miandrasa fotoana fohy hahavitana ny fizotry ny fisintomana. Haharitra minitra vitsy ny famitana ny fizotrany ka aza manidy ny kiheba na ny browser.
Azonao atao izao ny misintona ny SS Mod Menu kinova farany ho an'ny PUBG Mobile. Maimaimpoana izany ary tsy manome vola anao izahay noho ny fisintomanao azy na ny fampiasanao izany amin'ny findainao. Noho izany, andao tsindrio ilay rohy nomena mahitsy amin'ny farany ary apetaho ireo hacks tadiavina ao amin'ny PUBGM.
Sokajy Apps, Tools Tags SS Mod Menu, SS Mod Menu Apk, SS Mod Menu Download Post Fikarohana
PRMOVIES Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]